Burcad badeed xeebaha Soomaaliya ka qabsatay laba Markab oo laga leeyahay dalka Iran – Radio Muqdisho
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in burcad badeed ay xeebaha Soomaaliya ku qabsadeen Labo Markab oo Iran laga leeyahay.
Xafiiska Daroogada iyo dambiyada ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in Maraakiibtaasi ay saarnaayeen 48 shaqaale ah, ayna si sharci darro ah uga kaluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya.
Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa muujineysa in hoos u dhaca weerarada burcadu ay sababtay in ay bataan maraakiibta sida sharcidarada ah uga kaluumaysata xeebaha Soomaaliya, taasina ay kordhin karto weeraro dheeraad ah oo ay burcad badeeddu gaystaan.
Maraakiibta dagaalka ee caalamiga ah oo gaafwareega xeebaha Soomaaliya, ayaa gacan ka gaystay in ay hoos u dhacaan burcad badeeddii Soomaalida, kuwaas oo gaysan jiray ilaa 200 oo weerar sanadkiiba.
Sanadihii ugu dambeyay, ayaa waxaa yaraaday weerarrada burcad badeedda ka geysanayan xeebaha dalka Somaliya iyo xeebaha gacanka cadmeed,falkan lagu afduubtay maraakiibta Iran ayaa noqonaya kii ugu horayay ee ka dhacda xeebaha Soomaaliya tan iyo sanadkii 2012-kii.